Igbo, Romans, Lesson 011 -- The Wrath of God against the Nations is Revealed (Romans 1:18-32) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 011 (The Wrath of God against the Nations)
NDI ROM 1:22-23
22 N’igosipụta na ha maara ihe, ha ghọrọ ndị nzuzu, 23 wee gbanwee ebube nke Chineke nke na-apụghị ire ure ka ọ kpuchie arụsị dịka mmadụ ire ure na nnụnụ na anụmanụ nwere ụkwụ anọ na ihe na-akpụ akpụ.
Ọ dịghị mmadụ efu nwere ike ịdị ndụ na-enweghị Chineke. Ọ bụrụ na ọ gọnarị Onyenwe ya n’ime obi ya, ọ ga-echigharịkwuru chi ọzọ, n’ihi na mmadụ, n’ime onwe ya, ka emere ya ikwere. Ndi nile nke ekweghị na Chineke, ma ndi gụrụ akwukwo ma ndi n’agụghị akwụkwọ, nwere arụsị nke ha, nke ha tụkwasịrị obi, hụ n’anya, nye otuto, rara onwe ha nye, na ịchụ onwe ha nye. Itudesmụ igwe ndị a na-eweda ndị isi ala, na-enwe olileanya na ha ga-aga nke ọma. Onye ọ bụla na-akpakọba ego ma na-achọ akụnụba iji nwude ya na nkasi obi. A mikpuru ndị gụrụ akwụkwọ na akwụkwọ ha na nkà ihe ọmụma efu ha, na-eche na ha maara ihe, n'agbanyeghị na ha abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị ndị mmehie. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enwe olile anya maka ihe ịga nke ọma ha, n'agbanyeghị ọnụ ahịa ọ bụla. Studentsmụ akwụkwọ na-adabere na mmepe ọdịbendị, na ndị na-akwado ihe nyefere onwe ha na mmụọ nke mgbanwe. Egwu na-adakwasị mmadụ niile, n'ihi na udo nke Chineke adịghị n'ime obi ha.
Fọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ala na-etinye ihe mkpuchi na-acha anụnụ anụnụ na enyo nke ụgbọala ha iji gbochie ha anya ọjọọ, si otú a na-agọnarị ikike Chineke nwere ichebe ha. Ufọdụ ndị njem na-eyi ọgwụ ike, ndị echekwara na ha ga-enye ha ụdị nchebe ahụ. Ọtụtụ mmadụ na-agbakwuru ndị mgbaasị na ndị ọchụnta ego. Ha guzoro n'usoro n'usoro na-eche oge ha ka ha nwee ike iso ndị nwụrụ anwụ na mmụọ. Mụ nwoke na-emehie ihe karịrị otu nde ugboro kwa ụbọchị megide iwu mbu: “Abụ m Jehova Chineke gị. Gi enwela Chi ozo tiyerem”.
Ihe uwa ekpuola ìsì maka eziokwu nke ebube Chineke, ma nd men mmad náachighar after ihe mgbe ha mafere, naache anya na olileanya na udo nke obi ha niile. Ọtụtụ na-enwe nkụda mmụọ na enweghị nchekwube.
Ndị mmadụ nwere nnukwu mmasị na ịgbaso akụkọ banyere umu nwoke no na mbara, kpakpando ihe nkiri, na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na-elebaraghị iwu Chineke anya, ma ọ bụ ije ije. Ha na ebibiri ibe ha n'agha, ma bibie onwe ha site na igọnari Onye kere ha.
Nyochaa onwe gị! Gi hụrụ onwe gị n'anya, ma ọ bụ onye ọ bụla karịa ị hụrụ Onye kere gị n'anya? Gi tukwasiri obi injin nke ugbo ala gi? Ihunanya hụrụ ncha gị n’anya? Gi na-achọ mmezi n'etiti ndị mmadụ? Ebumnuche gị niile nke ụwa na-elelị Chineke. Yabụ, jiri obi gị dum, were mkpụrụ obi gị niile, werekwa ike gị niile hụ Onye-nwe gị n'anya, ka arụsị gị na chi gị na ọbụnadị ịchọ ọdịmma onwe gị naanị wee nwụọ, ebube na enyemaka nke Chineke wee nwetakwa gị.
EKPERE: Nna, anyi n’ekele Gi n’ihi na I kere anyi n’onyinyo gi, ma kpughee udidi gi n’ime Nwa gi. Biko kpughere ndi nile ihunanya gi na ekweghi ekwe gharipu n’ime uwa dum, ka edo doo aha Nna gi nsọ. Gbaghara anyị ma ọ bụrụ na anyị nwere chi ma ọ bụ arụsị ọzọ, ma kpochapụ ha n’echiche anyị, ka naanị Ọkpara gị wee bụrụ eze n’ime anyị ruo mgbe ebighị ebi.
Gini mere nwoke nke náenwegh Chineke naemere onwe ya chi nke wa?
Page last modified on January 25, 2021, at 09:00 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)